दुवै मृगौला फेल भएपछि ! टिनको टहरोमा बास, भुईको सुताई, ३५ वर्षको युवाको यस्तो पिडा | Samacharpati दुवै मृगौला फेल भएपछि ! टिनको टहरोमा बास, भुईको सुताई, ३५ वर्षको युवाको यस्तो पिडा – Samacharpati
गोरखा, ३ असोज । गोरखाको घ्याम्पेसालका ३५ वर्षिय सुमन परियार गाउँमा आफ्नै तुनेलो गरेर केटा केटी बढाउने, आफ्नो जिवन निर्बाह गर्दै आएका थिए । गाउँमा कुटो कोदालो गरेर जेनतेन घर व्यवहार चलाउदै आएका थिए । तर गत फागुनमा उनको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि उपचारका लागि जाँदा उनका २ वटा मृगौलाले काम गर्न छाडीसकेको कुरा जानकारी पाए । उनी छाँगाबाट झरेझै भए । त्यसपछि उनिहरु गाउँ छोडेर अहिले उपचारको लागि पोखरामा छन् । मृगौला पिडितलाई सरकारले १ लाख सम्मको डाइलासीस निशुल्क गरेको छ ।
उनिहरुले पोखराको लेकसिटी अस्पतालमा उक्त सेवा लिईरहेका छन् तर औषधि किन्न महंगो पर्ने भएकाले उनिहरुलाई समस्या भईरहेको छ । श्रमिान्लाई अलि ठिक हुदा कहिलेकाँही काम गर्न जान्छीन् कुमारी तर अधिकांश दिन श्रीमानसंगै बस्नुपर्छ । उनिहरु पोखराको न्युरोड भाटभटेनीको पछाडी चारैतीर जस्ताले बारेको एउटा टहराको कोठामा बस्छन् । सरकारले दिएको डाइलासीसको समय सकिन लाग्यो आम्दानी केहि छैन ।
उमेर बल्ल ३५ वर्षको छ कुमारीलाई अझै आफ्ना श्रीमानसंगै बस्न मन छ । समुनको मृगौला प्रत्यारोपणका लागि कुमारीले आफ्नो एउटा मृगौला दिन चाहान्थीन् तर ब्लड ग्रुप नमिलेका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन तर अझै उनको इच्छा आफ्नो मृगौला अरु कोही मिल्नेलाई दिने र उनिहरुको मृगौला राखेर श्रीमानको उपचार गराउने इच्छा छ । उनिहरु कसैले सहयोग गरे आफुहरुको समस्या केहि भएपनि समाधान हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । उनिहरुका तीन छोराछोरी गाउँमै बसेका छन् । १७ वर्षका ठुला छोराले आफ्नो पढाई छोडेर साना भाईबहिनीको सुसार गर्दै बसेको सुमनले बताए ।